निर्दयी बाबु जसले गरे आफ्नै छोरीको हत्या ! - Naya Pusta
निर्दयी बाबु जसले गरे आफ्नै छोरीको हत्या !
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ भाद्र २७ ११:२७ 3
बाजुरा । स्थानीय त्रिवेणी नगरपालिका–७ मा ४५ वर्षीय धनबहाुदर ऐडीले आफ्नै छोरीको हत्या गरेका छन् ।
ऐडीले पाँच वर्षीया छोरी रबिनाको हत्या गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहोराले जानकारी दिए। हत्या गर्ने बाबु धनबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घरभन्दा बाहिर करीब २० मिटर पर हत्या गरेको अवस्थामा बालिकाको शव भेटिएको छ ।
आमा तीज मनाउन त्रिवेणी नगरपालिका–९ स्थित माइतीघर ताम्सुमा गएको अवस्थामा हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार छोरीको हत्या करीब चार/पाँच दिनअगाडि भएको देखिएको छ ।
हत्याको कारणबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी टोली घटनास्थ पुगिसकेको प्रमुख नायब उपरीक्षक बोहोले बताए । मृतक रबिनाको शवपरीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल मार्तडी ल्याउन लागिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहोराले जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् : 'ट्रम्प-रुस साठगाँठको प्रमाण भेटिएन'
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए तीजको अवसरमा यस्तो शुभकामना
बस दुर्घटनामा ४५ जनाको मृत्यु
पञ्जाबविरुद्ध सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन: जिते स्टाइलिस प्लेयर अफ द म्याच अवार्ड